Ngwa nri Oyi kpọnwụrụ
Oyi kpọnwụrụ Siri anụ anụ ahụ
Oyi kpọnwụrụ kpọnwụrụ Cut Duku
Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ egbutu yabasị
Oyi kpọnwụrụ kpọnwụrụ Cut Carọt
Ire Nri Anụ Nju oyi
Friji sie anụ ezi anụ
Friji sie anụ ezi
Akọrọ ọkụkọ na ose
Zọ mmepụta otu ọkpụkpụ 1 ọkụkọ ụkwụ wepụrụ, tinye 1/4 yabasị, mpekere abụọ nke ginger, ngaji abụọ nke mmanya esi nri, iberibe scallion ọcha, gbanye awa ole na ole n'ime ite ahụ, wee jiri ndụdụ mee ọtụtụ iberibe apata anụ Obere oghere. Mpekere 2.1 nke ntụ ntụ ojii, ngaji abụọ nke mmanya esi nri, ngaji 1 nke ọkụ soy ihendori, ngaji mmanya mmanya abụọ, ọkara okpokoro nke ose ojii oji, ngaji abụọ nke mmiri oyster, 1 ngaji shuga, ...
Andtọ Ma Mkpụrụ Obi mapụtara mapụtara
Sweettọ na Uwe Mwepu Mpụtara (Sweet na Sour mapụtara mapụtara Ribs) bụ a nnọchiteanya omenala efere na a ụtọ na utoojoo uto. Ọ na-eji ọgịrịga anụ ezi dị ka isi ihe, anụ ahụ dị ọhụụ ma dịkwa nro, na agba nke efere emechara acha ọbara ọbara ma na-egbu maramara. “Ihe ụtọ na uto” bụ ihe ụtọ niile isi nri China nwere. Ọkpụkpụ anụ ezi na-atọ ụtọ na nke gbara ụka sitere na Zhejiang ma bụrụ nri Zhejiang a na-ahụkarị. Ezigbo anụ ezi anụ ezi na-atọ ụtọ bụ nke ukwuu gbasara usoro na ...
Nkwalite ngwaahịa Ngwaọrụ sitere n'ụlọ anụ na ụlọ ọrụ ndebanye aha mbupụ na China. Mbubata akụrụngwa tumadi si France, Spain, Netherlands nkọwapụta iberi na dais, eyi a eriri atụmatụ The ruru nke abụba na mkpa bụ 3: 7, abụba ma kegriiz. Tee ọwa Adabara nri nhazi, ụlọ oriri na ọ chainụ chainụ yinye na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọnọdụ nchekwa Cryopreservation n'okpuru -18 system Ngwa kpụkọrọ akpụkọ ozugbo. The CAS kefriza usoro bụ a Nchikota a Dyn ...
Nkwalite ngwaahịa Ngwaọrụ sitere n'ụlọ anụ na ụlọ ọrụ ndebanye aha mbupụ na China. Akụrụngwa akụrụngwa sitere na France, Spain, Netherlands, wdg nkọwapụta nkọwa ndị ọzọ, nabata atụmatụ ọdịnala Rụba abụba na mkpa bụ 3: 7, abụba mana ọ bụghị griiz. Tee ọwa Adabara nri nhazi, ụlọ oriri na ọ chainụ chainụ yinye na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọnọdụ nchekwa Cryopreservation n'okpuru -18 ℃ anụ friji na-ezo aka na anụ egburu, pre-c ...
Nkwalite ngwaahịa Ngwaọrụ sitere na ụlọ anụ na ụlọ ahịa mbupụ ndị edebanyere aha na China. Akụrụngwa dị na New Zealand na Australia. nkọwapụta nkọwapụta ndị ọzọ, nabata atụmatụ ndị omenala Tinye ọwa Kwesịrị ekwesị maka nhazi nri, agbụ ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọnọdụ nchekwa Cryopreservation n'okpuru -18 system Ngwa kpụkọrọ akpụkọ ozugbo. Usoro CAS na-ekpo ọkụ bụ nchikota nke magnetik na-arụ ọrụ na magnetik na-agbanwe agbanwe, ...
Oyi kpọnwụrụ Oyi
Nkwalite ngwaahịa Deba aha maka akụrụngwa, jiri yabasị anụ edo edo. Tinye ọwa Kwesịrị ekwesị maka nhazi nri, agbụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Agbanyeghị, nyocha ọhụụ gosiri na uru ekwuru na akwụkwọ nri friji dị elu karịa akwụkwọ nri ọhụrụ ....
Ekwentị: 0086- (0) 755-82450060
Otu esi adọta ndị ahịa gaa Meat Indu ...
Etu esi ahazi anụ na sayensị ya na ezinaụlọ
Nchedo na Ahụike Ahụike Nwoke Nri ...